၁ ဂဏန်းသမားများအကြောင်း – Trend.com.mm
မည်သည့်လတွင်မဆို ၁၊ ၁၀၊ ၁၉၊ ၂၈ ရက် မွေးသူများကို ၁ ဂဏန်းသမားများဟု
၁ ဂဏန်းသမားများအတွက် အချစ်နှင့်အမှန်းကြား နယ်နိမိတ်သည် မျဉ်းကြောင်းငယ်လေးမျှသာဖြစ်မည်။ ချစ်မိ၊ တွယ်တာ မိပြီဆိုက အရာရာပေးဆပ်တတ်ပြီး မုန်းပြီဆိုက လှည့် မကြည့်။ အလွန် ချစ်တတ်သလို အငြိုးအတေး ကြီးတတ်သည်။ မေတ္တာတရားနှင့် ချစ်ခြင်းအပေါ် အလေးအနက်ထား၍ ဘ၀အဖေါ်ရွေးချယ်လင့်ကစား ဂုဏ်၊ ငွေကြေးတို့ကို အဓိကထားသည်ဟု အများမှ အထင်လွဲခြင်းခံရ တတ်သည်။ အသက် ၂၅ နှစ်မတိုင်မီ သူတစ်ပါး ကတိစကားများ အပေါ်ယုံစားမိ၍ စိတ်သောက ခံစားရတတ်သည်။
အချစ်ဦးနှင့်ဆုံဆည်းကိန်းမရှိသော်လည်း အချစ်ဆုံးသူနှင့် လက်တွဲရမည်။
နေမင်းရဲ့တမန်တော်ဟာ လွတ်လပ်မှုကိုမြတ်နိုးတယ်၊ ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။
တက်ကြွလှုပ်ရှားတယ်။ တီထွင်ဖန်တီဆန်းသစ်နိုင်တယ်။ သူတပါးကိုအင်မတန်ကူညီတတ်တယ်။ အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်လဲမြင့်မားကြတယ်။ သူတို့ဟာ၁.၁၀.၁၉ နဲ့ ၂၈ ရက်တွေမှာ ဖွားမြင်သူတွေပေါ့။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ၊ထိပ်တန်းကလူတွေ၊ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
ဥပမာပြောရရင် ဆိုက်ကားနင်းရင်တောင် ဂိတ်မှူးလောက်တော့ အသာလေးဖြစ်တတ်သူတွေပါပဲ။
တခါတရံ မာနကြီးတာ၊ခေါင်းမာတာကတော့ သူ့စရိုက်မို့လို့ခွင့်လွှတ်ပေးရမှာပါ။
– ခေါင်းမာတယ်. ရိုးသားတယ်.. တဖက်သားကို မနာလိုဝန်တိုတတ်တယ်..ကြင်နာတက်တယ်..ဒေါသလွယ်တယ်။
-လူတွေအားလုံးရဲ့အထက်မှာပဲ နေချင်တယ်.. တခါတရံမှာ လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးတယ်..
-မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်တက်တဲ့ လူစားမျိုးဖြစ်တယ်။
-ငယ်ငယ်ရွှယ်ရွှယ်နဲ့ အချစ်ကို တွေ့တက်ကြတယ်..ဒါပေမယ့်..ရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်ရောက်မှပဲ လက်ထက်ဖြစ်ကြတာများပါတယ်။
-အမြင်မတူတဲ့သူတွေနဲ့ ပြဿနာတက်ရတာကို နှစ်သက်တယ်။
-အငြိုးအတေးကြီးပြီး..လက်စားချေတက်ကြတယ်..အသုံးအဖြုန်းကြီးသူတယောက်ဖြစ်ပေမယ့်..မင်းမှာ အလုပ်အကိုင်ကောင်းတွေ ရတတ်ပါတယ်။
-မင်းသာ အမျိုးသားဆိုရင်..အရမ်းနာမည်ကျော်မယ်.. ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို
ပိုင်ဆိုင်နေမှာဖြစ်ပြီ..လူတိုင်းက မင်းကို လေးစားနေပါလိမ့်မယ်..မင်းဟာ.နေရာစုံ
၀င်ဆန့်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်.. ရပ်ကွက်ထဲမှသည်.. ဟိုအပေါ် ပါလီမန်တွေထိကို
-မင်းက နေရာစုံသွားနိုင်သူပါ..ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့..ကိစ္စတော်တော်များများကို
မင်းက တဖတ်ကန်ခတ်အောင် သိနေတတ်တယ်လေ။
-မင့်ရဲ့မိသားစုဘ၀က အေးချမ်းလွန်ပါတယ်.. မင်းဟာ အဖော်မွန်ကောင်းကို
ပိုင်ဆိုင်ပြီး ချစ်စဖွယ်သားသမီးတွေနဲ့နေထိုင်ရပါလိမ့်မယ်..မင်းဟာ..ရှေ့ဆောင်သူ..လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးသူ..ဘာသာတရားကို ကိုယ်ရှိုင်းသူတယောက်ပါပဲ။
-မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအဖော်မွန် နံပါတ်တွေကတော့.. 4, 6, 8
…သင့်တင်တဲ့သူတွေကတော့.. 3, 5, 7။
မညျသညျ့လတှငျမဆို ၁၊ ၁၀၊ ၁၉၊ ၂၈ ရကျ မှေးသူမြားကို ၁ ဂဏနျးသမားမြားဟု
၁ ဂဏနျးသမားမြားအတှကျ အခဈြနှငျ့အမှနျးကွား နယျနိမိတျသညျ မဉျြးကွောငျးငယျလေးမြှသာဖွဈမညျ။ ခဈြမိ၊ တှယျတာ မိပွီဆိုက အရာရာပေးဆပျတတျပွီး မုနျးပွီဆိုက လှညျ့ မကွညျ့။ အလှနျ ခဈြတတျသလို အငွိုးအတေး ကွီးတတျသညျ။ မတ်ေတာတရားနှငျ့ ခဈြခွငျးအပျေါ အလေးအနကျထား၍ ဘဝအဖျေါရှေးခယျြလငျ့ကစား ဂုဏျ၊ ငှကွေေးတို့ကို အဓိကထားသညျဟု အမြားမှ အထငျလှဲခွငျးခံရ တတျသညျ။ အသကျ ၂၅ နှဈမတိုငျမီ သူတဈပါး ကတိစကားမြား အပျေါယုံစားမိ၍ စိတျသောက ခံစားရတတျသညျ။
အခဈြဦးနှငျ့ဆုံဆညျးကိနျးမရှိသျောလညျး အခဈြဆုံးသူနှငျ့ လကျတှဲရမညျ။
နမေငျးရဲ့တမနျတျောဟာ လှတျလပျမှုကိုမွတျနိုးတယျ၊ ဦးဆောငျနိုငျစှမျးရှိတယျ။
တကျကွှလှုပျရှားတယျ။ တီထှငျဖနျတီဆနျးသဈနိုငျတယျ။ သူတပါးကိုအငျမတနျကူညီတတျတယျ။ အုပျခြုပျမှုစှမျးရညျလဲမွငျ့မားကွတယျ။ သူတို့ဟာ၁.၁၀.၁၉ နဲ့ ၂၈ ရကျတှမှော ဖှားမွငျသူတှပေေါ့။ ခေါငျးဆောငျကောငျးတှေ၊ထိပျတနျးကလူတှေ၊ဖွဈတတျကွပါတယျ။
ဥပမာပွောရရငျ ဆိုကျကားနငျးရငျတောငျ ဂိတျမှူးလောကျတော့ အသာလေးဖွဈတတျသူတှပေါပဲ။
တခါတရံ မာနကွီးတာ၊ခေါငျးမာတာကတော့ သူ့စရိုကျမို့လို့ခှငျ့လှတျပေးရမှာပါ။
– ခေါငျးမာတယျ. ရိုးသားတယျ.. တဖကျသားကို မနာလိုဝနျတိုတတျတယျ..ကွငျနာတကျတယျ..ဒေါသလှယျတယျ။
-လူတှအေားလုံးရဲ့အထကျမှာပဲ နခေငျြတယျ.. တခါတရံမှာ လှတျလပျမှုကို မွတျနိုးတယျ..
-မိမိကိုယျကို ယုံကွညျတကျတဲ့ လူစားမြိုးဖွဈတယျ။
-ငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ အခဈြကို တှတေ့ကျကွတယျ..ဒါပမေယျ့..ရငျ့ကကျြတဲ့အရှယျရောကျမှပဲ လကျထကျဖွဈကွတာမြားပါတယျ။
-အမွငျမတူတဲ့သူတှနေဲ့ ပွဿနာတကျရတာကို နှဈသကျတယျ။
-အငွိုးအတေးကွီးပွီး..လကျစားခတြေကျကွတယျ..အသုံးအဖွုနျးကွီးသူတယောကျဖွဈပမေယျ့..မငျးမှာ အလုပျအကိုငျကောငျးတှေ ရတတျပါတယျ။
-မငျးသာ အမြိုးသားဆိုရငျ..အရမျးနာမညျကြျောမယျ.. ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ခန်ဓာကိုယျကို
ပိုငျဆိုငျနမှောဖွဈပွီ..လူတိုငျးက မငျးကို လေးစားနပေါလိမျ့မယျ..မငျးဟာ.နရောစုံ
ဝငျဆနျ့နိုငျတဲ့သူတယောကျဖွဈတယျ.. ရပျကှကျထဲမှသညျ.. ဟိုအပျေါ ပါလီမနျတှထေိကို
-မငျးက နရောစုံသှားနိုငျသူပါ..ဘာဖွဈလို့လဲ ဆိုတော့..ကိစ်စတျောတျောမြားမြားကို
မငျးက တဖတျကနျခတျအောငျ သိနတေတျတယျလေ။
-မငျ့ရဲ့မိသားစုဘဝက အေးခမျြးလှနျပါတယျ.. မငျးဟာ အဖျောမှနျကောငျးကို
ပိုငျဆိုငျပွီး ခဈြစဖှယျသားသမီးတှနေဲ့နထေိုငျရပါလိမျ့မယျ..မငျးဟာ..ရှဆေ့ောငျသူ..လှတျလပျမှုကို မွတျနိုးသူ..ဘာသာတရားကို ကိုယျရှိုငျးသူတယောကျပါပဲ။
-မငျးရဲ့အကောငျးဆုံးအဖျောမှနျ နံပါတျတှကေတော့.. 4, 6, 8
…သငျ့တငျတဲ့သူတှကေတော့.. 3, 5, 7။